Efa olana ekonomika fa tsy lafiny teknika intsony mantsy ny zava-misy ankehitriny eo anivon’ny Jiro sy Rano Malagasy, hoy ny praiminisitra Solonandrasana Mahafaly Olivier nandritra ny famaranana ny fivoriana ara-potoanan’ny Antenimieram-pirenena Tsimbazaza omaly. Nisy tokoa ny tsy fahaizana nitantana tamin’ny fampiasana na fandaniana ireo gazoala mampiodina ireo milina mpamokatra herinaratra izay efa fehezina amin’ny alalan’ny famerana ny tetibola, hoy ny lehiben’ny governemanta. Dingana goavana no efa noraisin’ny fahefana mpanatanteraka tamin’ny famoahana ilay didim-panjakana fanagadrana avy hatrany ireo olona rehetra mangalatra herinaratra. Ezaka iray hafa ny fitakiana ny fandoavan’ireo mpanjifa tsy mandoa ny saran-jiro sy rano amin’ny orinasa Jirama. Vahaolana maharitra kosa ny ialàna amin’ny asa tandrevaka mba hirosoana amin’ny fandraisana andraikitra tena matihanina, araka ny fanazavan’ny praiminisitra lehiben’ny governemanta.